Onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Afrịka na -agbasa ozi olileanya na Kilimanjaro
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Afrịka na -agbasa ozi olileanya na Kilimanjaro
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Afrịka Ozi olileanya
N'ịga ozi olileanya maka mmepe njem nlegharị anya n'Africa, Onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Afrịka (ATB) Cuthbert Ncube gara leta Kilimanjaro, nke kachasị elu na Africa, n'etiti ndị nnọchi anya ndị isi nke bọọdụ ya.
Onye isi oche ATB nọ na Northern Tanzania kemgbe izu gara aga, na -esonye na Expo East African Regional Tourism Expo (EARTE) nke kwụsịrị n'isi izu a.
Ndị otu ndị nnọchi anya ATB isi sitere na mba Africa dị iche iche so ya, Onye isi oche ATB gara Marangu, isi ụlọ ọrụ Kilimanjaro National Park.
Ha letakwara ọnụ ụzọ mbata maka ugwu ịrị elu Kilimanjaro.
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) Nleta onye isi oche n'Ugwu Kilimanjaro egosila mkpebi Board maka ịkwalite njem nlegharị anya nke Africa, na-agbasa ozi olileanya maka mgbake njem site na mbibi ọrịa COVID-19 na isi mmalite mmepe mpaghara na nke ime obodo.
Ugwu Kilimanjaro na mpaghara gbara ya gburugburu so na ebe ndị njem nlegharị anya na-ewu ewu maka njem nlegharị anya nke ime obodo, mpaghara na ime obodo ebe puku kwuru puku ndị na-eme ezumike obodo na-eme ezumike ekeresimesi na nke Afọ Ọhụrụ na mmemme Ista.
Tanzania mụnyere ọkụ "Freedom Torch" a ma ama n'ugwu Kilimanjaro afọ 60 gara aga, nke pụtara na ọ ga -enwu n'ofe ala wee weta olileanya ebe enwere nkụda mmụọ, hụ ebe iro dị, na ịkwanyere ugwu ebe ịkpọasị dị. Mana maka afọ a, ndị na-arịgo elu nke Ugwu Kilimanjaro, ka ndị otu ATB na-aga, ga-eziga ozi olileanya na Tanzania na Africa bụ ebe nchekwa maka ndị ọbịa n'oge a mgbe ụwa na-alụ ọgụ na ọrịa COVID-19. site na ịgba ọgwụ mgbochi yana usoro ahụ ike ndị ọzọ.
Mgbe ọ hapụsịrị Kilimanjaro, Onye isi oche ATB na ndị otu ya gara Mkomazi National Park, naanị ogige rhino na -azụ anụ ọhịa na East Africa. N'ịbụ nke dị n'Ugwu Pare nke Arc, ogige ahụ dị n'okpuru nlekọta nke National National Parks (TANAPA) ma dị ihe dị ka otu narị kilomita na iri abụọ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke obodo Moshi na mpaghara Kilimanjaro n'etiti okirikiri safari nke ugwu na ndịda Tanzania.
A na-echebe oke rhinos n'ime ebe nsọ gbara ogige dị square kilomita 55, nke dị n'ime ogige kilomita 3,245 square. Ndị na -eme njem nlegharị anya nwere ike ịhụ nnụnụ ndị a na -amụ ara nke abụọ kacha ukwuu na Afrịka karịa ndị nọ n'ọzara. Black rhinos na -agagharị agagharị n'etiti Mkomazi na gburugburu ebe obibi Tsavo na -ekpuchi Tsavo West National Park na Kenya.
Ya na Tsavo, Mkomazi bụ otu n'ime ihe nchekwa gburugburu ebe obibi kacha echebe n'ụwa. Mkomazi, n'akụkụ Osimiri Umba, na -akwado ọtụtụ enwe agba na -adịghị ahụkebe nke na -agagharị n'ime oke osimiri ya. Ogige ahụ nwere ihu igwe na-adịchaghị nke nwere ụdị nkesa mmiri ozuzo bimodal. Ogige ahụ nwekwara ụdị anụmanụ na -agba ara. Edekọla ihe karịrị ụdị nnụnụ 450 n'ogige ahụ, nwere ọtụtụ ahịhịa na anụmanụ pụrụ iche. Ọ so na mpaghara nchekwa ole na ole na Tanzania nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke anya gerenuk na mkpokọta Beisa Oryx. Ogige a bụ otu n'ime savannah ndị kacha baa ọgaranya na Afrịka na ikekwe n'ụwa site na ọnụ ọgụgụ anụ ọhịa na ahịhịa na -adịghị ahụkebe na -egosi site na ọnụnọ nkịta ọhịa na rhinoceros ojii.
N'oge nleta ya na Tanzania kemgbe izuụka gara aga, Maazị Ncube gosipụtara Onyinye njem nlegharị anya nke ATB nke 2021 Onye isi ala Tanzania, Samia Suluhu Hassan, maka nkwanye ugwu maka ntinye aka ya na mmepe njem nlegharị anya Tanzania. Ngosipụta onyinye nturu ugo ATB nye onye isi ala Tanzania mere n'oge mmeghe mmeghe nke First East African Regional Tourism Expo (EARTE) nke emere n'obodo Arusha nke Northern Tanzania. Onye isi ala ahụ duziri n'ịchịkọta akwụkwọ akụkọ Royal Tour nke na -egosi ebe ndị njem nlegharị anya na Tanzania, n'etiti atụmatụ ndị ọzọ o mere n'onwe ya iji kwalite mmepe ndị njem na Tanzania na Africa.